Ihe kacha mma Spanish Linux distros | Site na Linux
Ihe kacha mma Spanish Linux distros
Ọnwa ole na ole gara aga, anyị mere nhọrọ nke kacha mma Argentine Linux distros. N'oge a, anyị ahọrọla Spanish Linux distros kachasị mma na-echebara echiche: nkesa oke ala, mmelite ikpeazụ, ogo na mmezu nke usoro ahụ, ogo nke obodo ya, wdg.
1 Trisquel (Galicia)
4 Lliurex (Valencia)
5 Guadalinex (Andalusia)
7 MAX (Madrid)
8 Njikọ (Katalonia)
Trisquel GNU / Linux bụ ụdị nke GNU sistemụ arụmọrụ nke na-eji kernel Linux-libre. Ebumnuche ebumnuche nke ọrụ a bụ imepụta nke enweghị usoro zuru ezu iji rụọ ọrụ zuru ezu yana nkwado asụsụ dị mma. Versionsdị nke ugbu a gụnyere ntụgharị maka asụsụ Galician, Bekee, Spanish, Catalan, Basque, Chinese, French, Indian na Portuguese.
Ebe nrụọrụ weebụ: http://trisquel.info/
MoLinux bụ nkesa gọọmentị GNU / Linux nke Castilla-La Mancha Community Board. MoLinux dabeere na Ubuntu. Aha nke ụdị nke ọ bụla bụ ihe odide sitere na akwụkwọ akụkọ "The ingenious hidalgo Don Quixote de la Mancha", nke Miguel de Cervantes dere.
Enwekwara ụdị nke pere mpe: Molinux Zero dabere na Puppy Linux 4.2 ma na-enye dị ka opekempe chọrọ ihe nhazi 166Mhz, 32Mb Ram + Swap (64Mb akwadoro), CDROM + 20x draịva na diski ike. N'etiti atụmatụ ya bụ isi ekwesịrị ịdeba na ọ nwere nsụgharị dị ndụ yana enwere ike itinye ya na USB, Zip na draịva siri ike.
Ebe nrụọrụ weebụ: http://www.bilib.es/recursos/molinux/
ASLinux Desktop dị maka Intel 32-bit Intel na AMD CPUs, o nwere gburugburu zuru oke, kwụsie ike na nke na-emetụ n'ahụ nke na-eme ka ịnweta Linux yana nke ahụ gụnyere atụmatụ niile onye ọrụ njedebe nwere ike ịchọ: akpaaka ụlọ ọrụ, Intanet, multimedia, agụmakwụkwọ, egwuregwu , wdg, yana sistemụ nchekwa zuru oke dịka nchekwa onwe onye, ​​Windows virus scanner, na spam filter. ASLinux Desktop na-ejikọ ike na nkwụsi ike nke Linux, ike na ntụgharị nke Debian Sarge, yana omume enyi na ịdị mfe nke iji KDE. Isi okwu ya siri ike bụ nnukwu ojiji ya.
ASLinux Desktop dị ka nbudata n'efu.1 E nwekwara mbipụta igbe nke, nke nwere ụdị 2.0, nke a na-enye dị ka usoro nke ọrụ dị elu maka onye ọrụ site na Portal ASLinux, dịka nkwado teknụzụ, akwụkwọ na nbudata nke mgbakwunye ngwanrọ A na-enye ndị ọrụ niile ọrụ a ugbu a n'efu.
Ebe nrụọrụ weebụ: http://www.activasistemas.com/index.php?id=7
N’ịbụ nke Ministri Mmụta nke Generalitat Valenciana rụrụ, ebumnuche ya bụ isi bụ iwebata ihe ọmụma ọhụrụ na teknụzụ nkwukọrịta dabere na ngwanrọ na-akwụghị ụgwọ na usoro agụmakwụkwọ nke Obodo Valencian. LliureX dabeere na Ubuntu, mana ụdị ndị gara aga dabere na Debian.
A na-ekesa ya n'asụsụ abụọ ngalaba-ọrụ nke Valencian Community, Valencian na Spanish, na ụzọ abụọ: iji wụnye na dị ka CD-guzo naanị (LiveCD).
Ebe nrụọrụ weebụ: http://lliurex.net/home/
Guadalinex bụ nkesa Linux nke Junta de Andalucía kwalitere iji kwalite iji sọftụwia na-akwụghị ụgwọ na obodo kwụụrụ onwe ya. Ọ bụ GnuLinEx sitere n'ike mmụọ nsọ, ọrụ yiri ya nke Junta de Extremadura. Na mbu ọ dabere na Debian GNU / Linux n'ihi nkwekọrịta mbụ n'etiti Junta de Andalucía na Extremadura, ebe ọ bụ na mbipute 3.0 ọ dabere na Ubuntu.
Ebe nrụọrụ weebụ: http://www.guadalinex.org/
gnuLinEx bụ nkesa Linux n'efu na-adabere na Debian GNU / Linux na GNOME, yana OpenOffice.org dị ka ụlọ ọrụ, yana ngwa ndị ọzọ.
Ọ bụ Ministry of Economy, Trade and Innovation nke Autonomous Community nke Extremadura (Spain) na-akwalite ya, ebe ọ bụ onye ọsụ ụzọ na ndị ụlọ ọrụ ọha na eze na ndị ọzọ kwadoro na Spain ndị ọzọ. Ruo oge dị mkpirikpi, obodo Extremadura nyekwara ndị obodo Andalusia nkwado (nke sitere na GnuLinex iji mepụta Guadalinex) na mmejuputa usoro mmeghe na ụlọ akwụkwọ, nchịkwa, wdg.
Ebe nrụọrụ weebụ: http://linex.gobex.es/
MAX ma ọ bụ MAdrid_LinuX bụ sistemụ arụmọrụ dabere na Ubuntu (nke n'aka ya dabere na Debian GNU / Linux) nke Ngalaba Mmụta nke Community nke Madrid mepụtara. Rue mbipute 2 ọ dabere na Knoppix, nkesa CD dị ndụ nke dabere na Debian GNU / Linux.
Enwere ike iji sistemụ arụmọrụ a na ọnọdụ LiveDVD, enwere ike itinye ya na diski ike. Kemgbe 2003, e tinyela MAX nkesa na kọmpụta niile nke Madrid Ministry Ministry of Education wụnye na ebe agụmakwụkwọ na-abụghị mahadum.
Ọ na-ekesa site na ISO CD ma ọ bụ ihe oyiyi DVD, nke ikpeazụ bụ ụdị "ukara". Diski nwere nkesa ahụ gụnyere nhọrọ ntinye atọ, dịka a na-eji ya iji wụnye nsụgharị nke ndị ahịa na ihe nkesa, yana ikwe ka obere ihe nkwụnye bootable na ebe nchekwa USB. O nwekwara sistemu na-enye ohere itinye ngwa ngwanrọ n'efu na igwe Microsoft Windows.
Ebe nrụọrụ weebụ: http://www.educa2.madrid.org/web/max?c=an
Linkat bụ nkesa GNU / Linux nke Ngalaba Mmụta nke Generalitat nke Catalonia. Ọ dabere na nkesa OpenSUSE na arụmọrụ nke mmemme dabere na nchịkọta rpm. Ọ dị ugbu a na mpaghara 3.0 ma jiri gburugburu desktọọpụ Gnome na ndabara, ọ bụ ezie na gburugburu KDE na XFCE dịkwa.
Ebe nrụọrụ weebụ: http://linkat.xtec.cat/portal/index.php
Ndị ọzọ dị mma bụ: Kademar y Bardinux.
Mara: ewepụrụ ha na ndepụta ahụ Katix, AugustuX, gnUAMix, Lazarọs, LinEspa, LU3CM, Melinda na ndị ọzọ n'ihi na ha enwetabeghị mmelite n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Iji hụ a zuru ezu ndepụta niile Spanish distros, M nwere ike ikwu na ị gaa Wikipedia.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Faịlụ FileLet jiri » Ihe kacha mma Spanish Linux distros
Agbaghara kademar http://www.kademar.org/ na Bardinux http://bardinux.ull.es/ ma n'ezie anyị ahapụwo ihe karịrị otu.
Obi Ike Thd dijo
Eziokwu, n'ihi na ndị Katalan sụkwara Spanish, ọbụlagodi na ọ masịghị ha
Nzaghachi iji obi ike Thd
Francesc Llort dijo
Na-emelite. Càtix ga-adị na ndepụta ahụ ọzọ yana 1.7 nke ya, dabere na wheezy. Ezigbo, zuru ezu, site na ndụ cd ya.
Site n'ụzọ, ihe ọ bụla ndị Catalans ma ọ bụ ndị ọzọ bụ, ka onye ọ bụla kpebie, ọbụlagodi na ọ masịghị gị.
Zaghachi Francesc Llort
N’obodo niile, ọ bụ ndị agbata obi niile na-ekpebi ma ọ bụ na-apụ apụ n’etiti ndị agbata obi ya. Ọ bụghị nke gị? . Ọ bụrụ na ndagwurugwu Aran chọrọ nnwere onwe nke Catalonia, ndị Aranese niile ga-ekpebi ya ka ndị Catalan niile ga-ekpebi ya?
Ọnụ ụzọ ahụ bụ ee, ụzọ ọpụpụ ee e, ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịhapụ obodo iji biri n'ụlọ ọzọ, ndị agbata obi anaghị ahapụ gị n'ihi na ị ga-eme ntuli aka?
N'ezie ha nwere ike ikpebiri onwe ha.
manuel manrique dijo
Ndị Cartagena chọrọ ịnwe linux nke aka anyị ma nọrọ onwe ha.
Ọ ga-abụ: CartaLinux.
Ọ ga-adabere na Murcilinux
Ma ọ ga-enwe dị ka ndabere asụsụ El Panocho
Zaghachi manuel manrique
Linux matara dijo
Nke a bụ ezigbo mma dị na Spanish na Debian na-afanyekwa:
Zaghachi na Linuxknow
Ee ... Ezigbo mma tb!
Na 05/08/2011 23:18, «Disqus» <>
Zaghachi ka enyx
Na Antergos?. Cinnarch oge ochie.
M na-enye distro m na-eji, Bugtraq, na mbipute Black Di ya nwụrụ. Dabere na debian, ubuntu, na oghe oghe. Enwere ịhọrọ site na.
Banyere nkesa steeti, gịnị kpatara na ha ejikọtaghị ọnụ wee mee otu maka Spain n’ozuzu ya? Ọ ga-ezuru iji kwado asụsụ ndị dị ka Catalan, Spanish ma ọ ga-ebelata ọnụ ahịa nke idobe nkesa na mgbakwunye na ịme ka nnabata na akwụkwọ dị mfe.
Onyinyechi Nwachukwu dijo
Dịka onye ọrụ Linkat, ekwesịrị m ikwu na, taa, ozi banyere distro a dị iche na ihe akọwapụtara ebe a. Dị ka ọ dị taa, Linkat dabere na Ubuntu 12.04 LTS. Ozi ndị ọzọ bara uru: Ebe desktọọpụ bụ GNOME 2 ma ọ dịghị eji Unitydị n'otu.
Zaghachi na RichminD
Nchịkọta dị oke mma, mana dịka m ghọtara, Bardinux abụghị distro si Catalonia mana sitere na Tenerife, Canary Islands, nke Mahadum La Laguna mepụtara.
kedu ihe ncheta mgbe m jiri guadalinex edu 10.04: 'D
Ndewo onye ọ bụla, etinyere m Max 8, ọ ga-amasị m ịwụnye Windows 10, kedu ka esi eme ya? Na m furu efu, kelee onye na-enyere m aka
Nnọọ! Nke mbu, ndo maka igbu oge n’azịza ya.
M na-atụ aro ka ị jiri ọrụ Jụọ Site na Linux (http://ask.desdelinux.net) iji mepụta ụdị ndụmọdụ a. N'ụzọ ahụ ị ga - enweta enyemaka obodo niile.
Ọnye na -bụ Manuel Blanco Montero? dijo
Enwere m afọ iri na anọ iji = Linux Mere> na Spain Ugbu a, m na-eji Max Linux 14 «SITE VENEZUELA» NA-EKPERE NDAN SPANISH NA-AKWIGHKWỌ AKW QKWỌ KWES LRIN LINUX & IMPROVING SOFTWARELIBRE
Zaghachi Manuel Blanco Montero
Aptosid: distro na-akpali mmasị dabere na nyocha Debian
Ubuntu 8.04 LTS "Hardy Heron" agakwaghị akwado ya